Inona no Hataoko fa Nisaraka Izahay? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tiorka Tiv Tseky Turkmène Télougou Vietnamianina Yorobà Zoloa
Hoy i Steven: “Rehefa nisaraka izahay, dia tena kivy be aho. Mbola tsy nalahelo be hoatr’izany mihitsy aho.”
Efa nisaraka tamin’ny olon-tianao koa ve ianao dia nalahelo be? Raha izany, dia mety hanampy anao ity lahatsoratra ity.
Inona no tsapanao?
Tsy maintsy miteraka ratram-po ho anareo roa ilay fisarahana.
Raha ianao no nangataka ny hisaraka, dia mety ho tsapanao ny tsapan’i Jasmine. Hoy izy: “Nenjehin’ny eritreritro foana aho satria fantatro hoe nandratra ny fon’ilay olona tiako taloha aho. Tsy tiako intsony ny hanao hoatr’izany.”
Raha tsy ianao no nangataka ny hisaraka, dia mety hahatsapa hoatran’ireny olona maty havana ireny ianao. Hoy ny tovovavy atao hoe Janet: “Tena nalahelo be aho. Tamin’ny voalohany aloha aho tsy nety nino, avy eo tezitra be, dia nanambitamby, avy eo kivy be, ary efa ho herintaona tatỳ aoriana vao nanamboatra saina.”
Tadidio izao: Mety ho kivy be ianao rehefa nisaraka ianareo. Hoy ny Baiboly: ‘Mahamaina taolana ny fahakiviana.’​—Ohabolana 17:22.
Miresaha amin’ny olona matotra atokisanao. Hoy ny Baiboly: “Tia amin’ny fotoana rehetra ny tena namana, sady toy ny rahalahy natao hanampy amin’ny fotoam-pahoriana.” (Ohabolana 17:17) Ho afaka hisaina ianao ka ho azonao tsara izay manjo anao, rehefa miresaka an’izay ao am-ponao amin’ny ray aman-dreninao na amin’ny namana matotra iray.
“Nitokantokana aho nandritra ny volana maro, ary tsy noresahiko tamin’iza na iza ny tao am-poko. Afaka manampy anefa ny tena namana. Rehefa noresahiko tamin-dry zareo izay tao am-poko, dia izay aho vao tsy nalahelo be intsony.”—Janet.
Eritrereto hoe inona no azonao ianarana. Hoy ny ohabolana iray ao amin’ny Baiboly: “Miezaha hanana fahendrena, ary ataovy izay hananana fahiratan-tsaina.” (Ohabolana 4:5) Lasa misy zavatra fantatrao momba anao rehefa mandinika an’izay nitranga ianao. Lasa hainao koa hoe inona no tokony hatao rehefa diso fanantenana ianao.
“Rehefa nisaraka izahay, dia hoy ny namako iray: ‘Inona izao no lasa fantatr’ialahy momba ny fiarahana amin’ankizivavy? Dia ahoana no hataon’ialahy rehefa miaraka amin’ankizivavy hafa any aoriana?”—Steven.
Mivavaha. Hoy ny Baiboly: “Apetraho amin’i Jehovah izay manavesatra anao, fa izy no hanohana anao.” (Salamo 55:22) Ho maivamaivana ny alahelonao, rehefa mivavaka ianao. Mety ho afaka hisaina tsara koa ianao amin’izay.
“Mivavaha foana, fa fantatr’i Jehovah hoe malahelo be ianao, sady izy no mahafantatra tsara kokoa noho ianao ny tena zava-misy.”​—Marcia.
Manampia olona. Hoy ny Baiboly: “Aoka ny tsirairay aminareo hihevitra izay hahasoa ny hafa, fa tsy izay hahasoa ny tenany ihany.” (Filipianina 2:4) Vetivety ianao dia tsy halahelo be intsony, arakaraka ny iezahanao hanampy olona.
“Hoatran’ny hoe maizina tamiko ny tany aman-danitra, rehefa nisaraka izahay. Mbola maharary kokoa noho ny ratra amin’ny vatana ny ratram-po. Hitako anefa hoe lasa tsy dia malahelo be intsony aho, rehefa mandeha ny fotoana. Mila manam-paharetana fotsiny aho.”​—Evelyn.
Ahoana no hiatrehanao ny fiainana indray raha nisaraka tamin’​ilay olona nirinao ho vady ianao?
Hizara Hizara Inona no Hataoko fa Nisaraka Izahay?
ijwyp no. 66